राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणः के छ आजको कार्यक्रम? - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणः के छ आजको कार्यक्रम?
नयाँदिल्ली, बैसाख ५ । पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार मध्याह्न नयाँदिल्ली आइपुग्नुभएको छ । भण्डारीलाई इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय महिला राज्यमन्त्री कृष्णा राजले स्वागत गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई विशेष अतिथिको सम्मानसहित विमानस्थलबाट सिधै राष्ट्रपति भवन लगिएको थियो । राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपति भण्डारीसँग दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भेट गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, नेसनलिस्ट कांग्रेसका नेता डिपी त्रिपाठी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरी, जनता दल युनाइटेडका नेता शरद यादवलगायत नेताले भेट गर्नुभयो । भेटका अवसरमा उहाँहरूले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र समावेशीतामा नेपालले फड्को मारेको विषयमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रपतिले आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउने चुनौतीलगायत नेपालको संविधानमा महिला, सीमान्तकृत महिलाको अधिकारको सुनिश्चिततालगायत सवल पक्षबारे बताउनुभएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकार डा.मदनकुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबार औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायत ३४ जनाको टोली राष्ट्रपतिसँग छ । राजकीय भ्रमणको परम्पराअनुसार उहाँलाई भारतीय राष्ट्रपति भवनमा राखिएको छ ।
आज राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसँग भेट
भण्डारीले मंगलबार भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । अधिकांश भेटवार्ता त्यही दिन हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय उपराष्ट्रपति हमिद अन्सारी, भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज, भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीलगायतले भण्डारीसँग मंगलबार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस राष्ट्रपतिलाई भारतीय विदेशमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रश्न- स्थानीय तह निर्वाचन के हुँदैछ ?
मंगलबार साँझ भारतीय राष्ट्रपतिले भण्डारीको स्टेट ब्यांक्वेट दिने कार्यक्रम छ । मंगलबार नै राष्ट्रपतिले भारतीय उद्योगी र व्यापारीले आयोजना गर्ने बिजनेस इभेन्टमा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ । दिल्लीपछि राष्ट्रपति भण्डारीले गुजरात र उडिसाको भ्रमण गरी द्वारिका, सोमनाथ र पुरीस्थित मन्दिरमा पूजा–अर्चना गर्ने कार्यक्रम छ । दिल्लीस्थित जमुना बायोडाइभर्सिटी पार्कको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली दूतावासले सोमबार साँझ स्वागत कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । त्यसअवसरमा उहाँले नेपालको नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला सहभागिताको अनुपातले विश्वका महिलालाई गौरवान्वित बनाएको बताउनुभयो । भण्डारीले महिला सशक्तीकरणको हकमा नेपाल निकै अगाडि रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘संसारभरका महिलाको व्यथा एउटै छ, महिला विभेदमै छन् । विश्वमा नेपाल मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ संवैधानिक पद, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च अदालतसम्म महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन् । ‘नेपालको संविधानले स्थानीय निर्वाचतमार्फत ४० प्रतिशत महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । २० प्रतिशत दलित महिलालाई स्थानीय निर्वाचनमार्फत चुनिएर आउने अधिकार प्रदान गरेको छ, योभन्दा असल संवैधानिक व्यवस्था के होला’, संविधानका सबल पक्षलाई विश्लेषण गर्दै राष्ट्रपतिले भन्नुभयो ।
याे पनि पढ्नुस राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रवासी नेपालीको भेट
नेपाल शान्ति विकास स्थायित्वतर्फ अघि बढिरहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सबै मिलेर लोकतन्त्र स्थापना गर्‍यौं, आगामी दिनमा नेपालको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’
राष्टपति भण्डारीले तीन तहको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा प्रवासमा बसेका नेपालीको सहयोग र योगदान महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न प्रवासमा रहेका नेपालीलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रवासमा बसोवास गरिरहेका नेपाली मुलुकका सद्भावना दूत हुन् । नेपालको विकासमा उहाँहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।’
दिल्लीस्थित दूतावासमा विवाद
राष्ट्रपतिको सम्मानमा बारम्बार रोडस्थित दूतावास परिसरमा मञ्च बनाएर स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा भारतीय व्यवसायीको छाता संगठन एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सद्वारा प्रायोजित ब्यानर दूतावासको मुख्यद्वारदेखि वरिपरिको वालमा टाँगिएको थियो । दूतावासको स्वीकृति लिएर सो ब्यानर टाँगिएको थियो । त्यसैगरी, वाइवाइ चाउचाउको ब्यानर पनि दूतावास परिसरको स्वागत मञ्चस्थलमा टाँगिएको थियो । यो ब्यानर राख्न दिएकोमा प्रवासी नेपालीले विरोध जनाएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस चर्काे आलोचनापछि राष्ट्रपति फर्किने दिन सार्वजनिक विदा नहुने
मुलुकको राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई व्यावसायिक बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका थिए । यो कदमको विरोधमा एमाओवादीको भ्रातृसंगठन अखिल भारतीय एकता मञ्चका सदस्यले कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘यसरी राष्ट्रपतिको स्वागतमा कुनै संघसंस्था तथा प्रोडक्टलाई विज्ञापन गर्न दिनु, ब्यानर नै लगाउनु गलत हो,’ प्रवासी नेपाली संघ भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले भन्नुभयो । प्रवासी नेपाली संगठनले दूतावास अधिकारीसँग निकै चर्को विरोध गरेपछि यी ब्यानर हटाइएको थियो ।
नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे, प्रवासी नेपाली संघका अध्यक्षलगायत केन्द्रीय सदस्य गोपाल थापालगायतको पहलमा ब्यानर हटाइएको थियो ।
ट्याग्स: bidhya devi bhandari visit india